WordPress: Boostada la Xiriira Qaadashada | Martech Zone
Talaado, Janaayo 1, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddii aad isticmaaleyso WordPress, mid ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay waa inuu noqdaa Post xiriira plugin. Taasi waxay tiri, waxaan ogaaday in mugga ereyada muhiimka ah ee lagu dhajinayo Daily Reads ay runti xagalinayaan natiijooyinka boostada ee laxiriira.
Sidoo kale, runtii waan la yaabay in waxyaabaha ku lifaaqan Post-yada ay kaliya bixiyeen liistada qoraallada la xiriira ka hor boostada aad aqrinaysid! Kawaran haddii aad bedeshay maskaxdaada (sida aan badanaa sameeyo!)… Sow ma aha inaad sidoo kale bixiso qoraallo la sii daayay ka dib markii asalka laakiin wali la xiriira?
Natiija ahaan, waxaan ku sameeyay xoogaa yar oo yar-yar oo ah qalabka wax lagu dhejiyo. Marka hore, si loo tixraaco qoraallada labadaba kahor iyo kadib boostada hadda, waxaan wax ka beddelay khadka 91 ee:
. "IYO TAARIIKHDA post> = '$ hadda'" ilaa (WAQDAY: 11/15/2011):. "IYO TAARIIKHDA-taariikhda! = '$ Hadda'". "IYO taariikhda kadib <= CURDATE ()"
Marka labaad, Akhrinta Maalinlaha ah ee ku qoran boggeyga waxaa si otomaatig ah u soo geliya Del.icio.us oo hoos timaada Qoraa gaar ah (si aanan waligey u beddelin erayga sirta ah una jebin dhajinta otomaatigga ah). Si tan loo sameeyo, waxaan ku soo kordhiyay halbeeg kale oo weydiin ah si aan uga reebno qoraaga qoraalada la baaray adoo galinaya xariiqda soo socota tii hore:
Waxaan ku helay lambarka qoraaga si fudud anigoo ka fiirinaya adeegsadayaashayda. Waxaan jeclaan lahaa in aanan ka dhigin waxyaabaha cakiran adoo ku biiraya miis kale - waxay yareyn kartaa xawaaraha natiijooyinkaan lagu soo bandhigo waxayna yareysaa waqtiga xamuulka. Taasi waxay u horseedi doontaa dadka waaweyni inay niyad jabaan oo ay baxaan.
Faa’iidooyinka Muujinta Qoraalada La Xiriira
Qoraalada la Xiriira waa aalad aad u fiican oo loogu talagalay baloog kasta. Qoraalada laxiriira waxay xoojinayaan Natiijooyinka Mashiinka Raadinta adoo ku weyneynaya ereyada muhiimka ah xiriiriyeyaasha, waa cunsur muhiim u ah algorithms-ka Search Engine.
Qoraalada laxiriira kaliya maahan a SEM qalab, in kastoo. Qoraalada laxiriira waa aalad haynta oo dadka isticmaala ku hayn doonta. Waxaa laga yaabaa inaysan helin wixii ay raadinayeen halka ay ka soo degeen - laakiin haddii aad u siiso tixraacyo dheeraad ah, way ku dhegi karaan!
Tags: Cabir CPmyreponoqoraallada la xiriira
Jan 2, 2008 saacadu markay ahayd 9:23 PM
Trick qabow. Anigu ma aanan fahmin Qoraallada la Xiriira kaliya waxay doortaan qoraallo hore oo blog ah… Waa inaan tagaa wax ka beddelo fiilada. Waad ku mahadsantahay madax kor iyo tilmaamaha 🙂
… Iyo sanad cusub oo wanaagsan!
Khayaano wanaagsan - in kasta oo shaqsiyan aan u isticmaalo Tilmaamo Fudud oo loogu talagalay qoraalada laxiriira ku saleysan tags, laakiin waxaan gebi ahaanba ku raacsanahay in qoraalada la xiriira ay tahay waajib.
Jan 3, 2008 saacadu markay ahayd 1:05 PM
waaw .. tani waa xeelad hagaagsan. In kasta oo aanan haysan qoraalo la xidhiidha wasabi la xidhiidha, waxaan haystaa 'Simple Tags plug-in' oo loogu talagalay qoraalada la xidhiidha waxaanan qiyaasayaa inay tahay inay u isticmaalayso isla isla taariikhdii <xaaladda. Waad ku mahadsan tahay tilmaanta, aan iska hubiyo koodhkayga furaha oo aan arko haddii aan wax ka beddeli karo si aan u helo natiijooyin wanaagsan.
Jan 3, 2008 saacadu markay ahayd 7:32 PM
Chandoo, Tags fudud ma isticmaalo xaalad taariikhi ah - waxaan aaminsanahay inay abuureyso qoraalada la xiriira tooska, oo leh bog kasta aragtida (ilaa aad kaydku daarto mooyee). Taasi maahan waxa ugu waxtarka badan ee serverka, laakiin macnaheedu waa inay heli doonto kulamada ugu fiican, ha la dhajiyo ka hor ama kadib boostada markii la daawaday.
Doug - waan ka xumahay inaad mowduuca ka yara baxdo…
Jan 3, 2008 saacadu markay ahayd 8:02 PM
Wax walwal ah maleh, Stephen! Idinku waxaad tihiin xiisaha aan u qabo! Hadda waa inaan tago si aan u hubiyo Tags fudud!
Farriin weyn! Laakiin waxaan rabaa in aan doorto dhowr nits.
Caddayntaada “(kuma xirna) miis kale”Maxaa yeelay:
"waxay yareyn kartaa xawaaraha natiijooyinkaan lagu soo bandhigo waxayna yareysaa waqtiga xamuulka"
waa xad gudub iyo tusaale wax ka qabasho deg deg ah oo hortaagan joogtaynta, waana wax laga xishoodo in la arko dad leh dhagaystayaal aad u tiro badan oo kugula talinaaya waxyaalahan oo kale maxaa yeelay waxay ku faafisaa macluumaad khaldan.
SQL-ga aad kuhadleyso ee aad kahadleyso, adigoo u maleynaya inaad leedahay tusmooyin macquul ah oo meesha yaala ayaa kordhin doona waqtiga jawaabtaada ugu badnaan microse seconds. Waxaad ubaahantahay inaad haysatid tan iyo tan oo taraafik ah kahor intaan qofna ogaan xitaa farqiga nus-labaad. Hadda haa, haddii aad naftaada qasabto waad qori kartaa si dhab ah maskaxda maskaxda SQL code oo si xun u shaqeyn doona, laakiin ku biirista dheeraadka ah ee xogta keydku maahan tusaale taas.
Sidoo kale, intii aan u doodi lahaa jabsiga qof walxaha uu soo daabacay, waxaan runtii jeclaan lahaa inaan arko adiga oo u doodaya xoojintiisa ka dibna ka shaqeynaya sidii kor u qaadistaada loogu dari lahaa qalabka dhabta ah laftiisa. Sidan oo kale, waxaad heli kartaa koodhadh hiwaayad ah si ay u adeegsadaan isbeddeladaada ka dibna mar dambe loo cusbooneysiiyo nooca cusub ee fiilada waxayna furfuraan isbeddelada laakiin ma ogaan karaan waxa qaldamay. Isbedelkaagu waa mid aan fiicnayn, kaliya luminta shaqeynta, laakiin qaar ka mid ah hacks waxay sababi karaan goob inay jabto haddii dib-u-eegis mustaqbalka ah ee qalabka asaasiga ah loo isticmaalo dusha sare ee midka la jabsaday.
JMTCW. Sii wad howsha wanaagsan haddii kale. 🙂
Waad ku mahadsan tahay jawaab celinta - ma hubo inaan oggolahay, in kastoo. Si dhakhsa ah uma aanan hagaajin… xaqiiqda, waxaan helay habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo dhammaan howlaha aan u baahnahay anigoon u baahnayn inaan sameeyo isbeddello dheeri ah. Buuggayga, taasi waa inay noqotaa bartilmaameed kasta oo bartilmaameed ah.
Aniguba waan iri waayeen saameyn ku yeesho waxqabadka. Kuma aanan dhibin tijaabinta ama isku dayga maxaa yeelay lama huraan ma ahayn iyadoo la tixgelinayo qaabka aan ugu fiicnaaday fiilada. Mar labaad - Waxaan helay 100% shaqadii aan u baahnaa anigoon ku biirin ama ku darin tusmada, iwm. Taasi waa xalka saxda ah ee ku yaal buuggayga.
Waan kugu raacsanahay qoraaladaada kale, in kastoo. Waxaan kahadlayaa dib-u-daabicida fiilooyinka, waxaan dareemayaa sidii inaan uga faa'iideysanayo qof kale shaqadiisa. Waxaan tixraacay barta qoraaga ee arinkaan - marka waxaa laga yaabaa inuu tixgelin siin doono kuwan sida astaamaha sii deynta mustaqbalka.
PS: Go'an tifaftirka! 🙂
Jan 5, 2008 saacadu markay ahayd 12:24 PM
@Douglas: Anigu ma hubo inaan ogolahay, in kastoo. Si dhakhsa ah uma aanan hagaajin? Mar labaad - Waxaan helay 100% shaqadii aan u baahnaa anigoon ku biirin ama ku darin tusmada, iwm.
Waa hagaag, waxaan u maleynayaa in taasi ay tahay farqiga u dhexeeya qof ka daawanaya barnaamijyada kaamilnimada xirfadda iyo farsamada iyo qof kale oo practioner ah oo isku dayaya inuu wax uun qabto (oo taasna macnaheedu maahan inuu ku faraxsan yahay; liisaska boostada qaarkood waxaan ku ciyaaraa doorka warqad ee kan hore. 🙂
Waxay la mid tahay sida xisaabiyaha ama qareenku ugu sheego milkiilaha ganacsiga “Taasi ma sameyn laheyn”Iyo milkiilaha meheraddu, isagoo aan ku sii talaabsanaynin dhammaan ciqaabta ay xirfadlayaashu ka warqabaan inay yihiin * karti * iska dhaga tiray taladooda sababta oo ah waxay umuuqataa dadaal aad u badan, wuuna jeexanayaa Ilaah wuu ogyahay inaan hore u ahaa milkiilaha ganacsigaas oo aan horay uga sii falay talo bixin kasta, in kastoo wax badan oo dambe aan ku xirxiro. 🙂
@Douglas: Waxaan kahadlayaa dib u daabacaadda plugins,…
Maya, taasi sax maahan wixii aan sheegayay. Waxa aan sheegayay ayaa ah maadaama oo ay tahay il-furan waad ku biirin kartaa isbeddeladaada qoraaga asalka ah way aqbali doonaan, waadna ku dhaqaaqi kartaa si firfircoon adoo la xiriiraya oo bixinaya. Hadda waxaan u shaqeeyaa sidii lataliye suuq-geyn iyo hirgeliyaha degel ee daabacaadda daabacaadda iyo isticmaalka Drupal loogu talagalay teknolojiyada websaydhka, bulshada Drupal-na waxay had iyo jeer la xiriiraan qorayaasha qorayaasha (Drupal waxay ugu yeeraan "modules") waxayna ku deeqaan inay gacan ka geystaan ​​hagaajinta qaybaha kale.
PS Waad ku mahadsantahay hagaajinta tafatirka.
Jan 5, 2008 saacadu markay ahayd 1:37 PM
Dhibco wanaagsan, Mike!
Waxaa laga yaabaa inaan ku fekero sheyga si aan ugu daro ikhtiyaarkaa ah "Kaliya muuji Qoraallada Kahor Boostada La Soo Bandhigay". Waxaan u maleynayaa ikhtiyaarka labaad inuu waxyar uun ka hanti badan yahay boggeyga, laakiin waan hubin doonaa oo arki doonaa inay danaynayso qoraaga.
Jan 5, 2008 saacadu markay ahayd 6:10 PM
@Douglas: Waxaan u maleynayaa in ikhtiyaarka labaad uu waxyar uun ka hanti badan yahay boggeyga…
Haa, waan oggolahay. Hase yeeshe heshiis wanaagsan!
Ku dheji qaabeynta faallooyinka hore! Waxaan jeclaan lahaa inaad aragti hore dhiibato! '-)
Maalin maalmaha ka mid ah!
Jan 31, 2008 saacadu markay ahayd 2:43 PM
Doug - Waxaa laga yaabaa inaan wax ka maqnaado halkan. Waxay u muuqataa taas
kama horjoogsanayo qoraallada la sameeyay ka dib boostadaas gaarka ah in lagu daro, inta ay ka hortagto ka mid noqoshada qoraalada laga yaabo inaad dejisay la daabacay mustaqbalka.
Rajaynaynaa in macno samaynayso iyo mahadsanid baloogga weyn.
Jan 31, 2008 saacadu markay ahayd 3:56 PM
Taasi waa helitaan weyn! waxaan hubaa in qof walba (oo horay wax u qoraya) uu qadarin doono.
Waxaan ku cusbooneysiin doonaa weydiinta boostada.
Feb 2, 2008 markay ahayd 8:40 PM
@Mike: Hagaag, waxaan u maleynayaa in taasi ay tahay farqiga u dhexeeya qof ka daawanaya barnaamij kaamil ah xirfadda iyo farsamada gacanta iyo qof kale oo ficil ah oo isku dayaya inuu wax qabto.
Kala sooc xiiso leh. In kasta oo ay fiicnaan laheyd in wax walba ay ku socdaan sida ugu fiican ee ay noqon karto, xaalado badan oo u muuqda kuwo aan macquul ahayn. Waxaan ku dadaalayaa inaan ka helo dheelitirka barnaamijyadayda inta udhaxeysa sida aan jeclaan lahaa in wax u socdaan iyo inta $ ama waqtiga ay igu qaadaneyso in la helo.
Waxaan ku dadaalayaa inaan sameeyo waxa ugu yar ee ay igu qaadato si aan u gaaro ujeedada aan isku dayo inaan gaaro. Inaad waqti badan qaadatid kharash ahaan kuma filna.
Marka la soo koobo, haddii lumintaas wax ku oolnimada mooyee aan ku ogaan lahaa boggeyga ma isticmaali doono waqtiga dheeriga ah, Haddii ay ka muuqato wax ka badan waxaan go'aansan lahaa haddii waqtiga dheeriga ah uu u qalmo natiijada. Kaamilnimadu had iyo jeer maahan xalka ugu fiican.
Feb 3, 2008 markay ahayd 4:04 PM
@Dwayne: Waxaan ku dadaalayaa inaan sameeyo waxa ugu yar ee ay igu qaadanayso si aan u gaadho ujeedka aan isku dayo inaan gaaro. Inaad waqti badan ku bixisid waxtar ma leh.
Dabcan haddii had iyo jeer sameynta ugu yar ay ka dhigan tahay inaadan baran farsamooyin fiican oo kuu keenaya inaad ku celceliso ugu yaraan marar badan mustaqbalka halkii aad ka oggolaan lahayd inaad iska ilaaliso, markaa waxaad sameysay guul been ah. Haa, hawlo badan uma baahna dadaal dheeri ah laakiin waxaan goobjoog u ahaa dad badan oo toobiyeyaal sidan oo kale u qaadaya waqtiyadii lasoo dhaafay waxayna ahaayeen kuwa ugu wax soo saar yar iyo / ama ugu yaraan wax abuura ee aan aqaan (qaar ka mid ah nasiib darro waxay ahaayeen shaqaalahayga) , markaa sababta aan runtii u ogaaday wax soo saarkooda.)
@Dwayne: Marka la soo koobo, haddii lumintaas wax ku oolnimada mooyee aan ku ogaan lahaa barteyda ma isticmaali doono waqtiga dheeriga ah, Haddii ay tahay mid la ogaan karo ka badan waxaan go'aansan lahaa in waqtiga dheeriga ah uu u qalmo natiijada. Kaamilnimadu had iyo jeer maahan xalka ugu fiican.
Waxaan u maleynayaa inaad dhibtayda dhibtay. Marka hore waxaan dhihi jiray Doug wuxuu ku fiicnaaday waxqabad aan la fahmi karin, aniga maahan, laakiin waxaa taas ka sii muhiimsan haddii aad fulinaysid khayaano sababi kara arrimaha sii wadista mustaqbalka wanaagga aawadiis ha u daabicin dadka kale isticmaalkooda adiga oo aan ugu yaraan u sheegin iyaga. nooc ka mid ah dhibaatooyinka dayactirka oo ay u sababi karto iyaga hadhow.
Waxyaabaha layaabka leh ee faallooyinkaaga ayaa ah in qaadashada dariiqa degdega ah ee fudud ay inta badan ku dhamaato inay kugu lumiso waqti aad u badan oo mustaqbalka ah markaad rakibto cusbooneysiin amniga ah ee WordPress-kaaga, dabaciso howlahaaga jabsaday oo aad dib u rabto. Hadda waxaad haysataa caws heersare ah oo irbad kaa maqan waxaadna hadda u baahan tahay inaad ogaatid meeshii irbaddu ahaan jirtay.
Waqti dheeri ah ku qaad waxqabadka? Bah, guud ahaan looma baahna. Waqti dheeri ah ma ku bixisaa dayactirka? Haa, badanaa way is bixisaa mustaqbalka fog.
Isku soo duub, haa waa dabeecadda aadanaha in la iska fogeeyo digniinta loogu talagalay waxyaabaha aan waligood naftaada xanuun u keenin. Dareemo xanuunka hal jeer waxaadna u badan tahay inaad u hogaansanto digniintaas kuwa kale ee horey u dareemay xanuunkaas.
Feb 3, 2008 markay ahayd 8:03 PM
Hal shay waa inaan dhahaa; Waxaan u maleynayaa in jabsiga Doug uu noqon doono mid si fiican ugu soo kordha WordPress, ugu yaraan xulasho isticmaale. Waxay umuuqataa doqonimo in lagu xadido qoraalada laxiriira kaliya kuwa kahor yimid.
SIDOO KALE, waxaan jeclaan lahaa inaan ka codsado Doug inuu wax ka qoro sida loo qoro dhambaalladiisa maalinlaha ah ee del.icio.us; taasi waxay noqon laheyd mowduuc xiiso badan.
Feb 3, 2008 markay ahayd 8:09 PM
Waan kugu raacsanahay adiga… waana tan sida loo sameeyo qoraalada maalinlaha ah ee ka socda Del.icio.us. Ku raaxayso!
Feb 3, 2008 markay ahayd 8:22 PM
Heh. Mid fiican! Waxaan u maleynayaa inay ahayd inaan markii hore u googolleeyo.
BTW, waxaan kuu soo diray emayl shaqsi ah oo ku saabsan aniga oo jooga Indy Feb 16-19 qiyaastii usbuuc ka hor laakiin dib uma maqal. Ma heshay? (xor u noqo inaad tirtirto qaybtaan ra'yigayga ah.)
Farriin weyn, waxaan ku sameyn doonaa isbeddelka ku saabsan qalabkeyga mahadsanid mar kale!